Haddii aad rabto in aad sameyso filimada guriga in dadka afuufi doonaa, ama aad rabto in la abuuro videos for ganacsigaaga in bandhigo waxyaabaha aad ka xagal kasta, waxaad u baahan tahay barnaamij video gaare 3D. Laakiin iyadoo barnaamijyo badan oo kala duwan oo halkaas, sidee ayaad u dooran barnaamij ah in ay kugu habboon? Qaarkood waa bilaash, qaar ka mid ma aha. Qaar ka mid ah way adag yihiin si ay u isticmaalaan, halka kuwa kale ay qaataan oo kaliya daqiiqad si ay u bartaan. Waxaa kaloo jira dhowr siyood oo aad u isticmaali karto barnaamijyada 3D u videos - abuurista kuu gaar ah, sixiddiisa video ah ee hadda jira, ama horumarinta animations. Si loo caawiyo soo koobto hoos doorashooyinka, halkan waa top toban barnaamijyada video qaadashada 3D lacag la'aan ah.
10. Full Video Motion
Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad xaalkaa, gooyay, iyo paste videos ka dib markii filim la toogtay ama aad samayn karto tafatirka waqtiga dhabta ah. Waxaa la iman saamaynta gaar ah oo aad ku dari kartaa in haddii aad rabto. Qaababka kale waxaa ka mid ah xijaab video Falanqeynta kuu oggolaanaysa in aad aragto final version aad film ee sida aad u tagto, ka saareen wixii walaac ah oo ku saabsan u fiiriyaan final. Waxaad edit karaa in mid ka mid 2D ama 3D la kala guurka, iyo sidoo kale soo saaro videos qeexitaanka sare. Marka aad ku dhameysatay kaalinta abuuraya aad masterpiece, waxaad isla markiiba on Facebook ama Twitter, ama in aad xisaabta Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 waxaa wadaagi kara. Tani waa mid ka mid ah barnaamijyada la version tijaabo ah ama aad u cusboonaynta kartaa in nooca buuxda ee dhammaan qaababka.
Waxa uu barnaamijkaaga u gebi ahaanba bilaash ah sidoo kale waa mid aad u diro daafaca. Waxaad ku shuban kartaa tiro ka mid ah OSS, oo ay ku jiraan OS X iyo Linux, si aad u faaiidaysan karaan ugu badnaan xoogga mashiinada kuwa. Ma aha inay ka cabsadaan, si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay makiinadda Windows - waa weli ma sii shaqeyn doonaa Windows, sidoo kale. Waxad abuuri kartaa sanamyadiinna gaar ah oo isticmaalaya farshaxan iyo dhaqaaqo image in isticmaalka feature dakhalka. Waxa kale oo jira editor content ah si aad ku dari kartaa qoraalka si aad videos. Barnaamijkan gaar ah ma aha, waayo, bilow ah, si kastaba ha ahaatee. Si qoto dheer ah muuqaalada waa weyn, oo waxaa loogu talagalay khibrad video abuuray.
Kani waa barnaamij ilo kale oo u furan in uu yahay heerka bilowga ah wax yar ka badan saaxiibtinimo. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u qaadidda adiga kuu gaar ah videos, ama u abuuraya videos advertising u ganacsigaaga. Wax la yimaado saamaynta gaar ah loo dhisay Sida nalalka ama hoos abuurista iyo kala guurka ee sida, oo uu idin wada siiyo awood u leeyahay inuu video compositing. Haddii aad rabto in aad u isticmaasho 2D ama 3D videos, Wax qaban karaa. Waa la qabsiga waxa loo isticmaali lala barnaamijyada kale video tafatir sida Adobe jilitaankii kuwa isticmaala badan oo horumarsan. Haddii aad ogtahay sida, waxaad isticmaali kartaa xawaaraha sawiro ku yaal kaarka video inay sameeyaan tafatir oo ku darto saamaynta gaar ah in waqtiga dhabta ah.
Kani waa barnaamij il furan oo loogu tala galay si loogu isticmaalo Windows ama Linux. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad samayn-waqtiga dhabta ah video tafatirka in tiro ka mid ah qaabab, oo aad samayn kartaa oo darka 3D iyo sidoo kale filimada Flash. Your video laga sameyn karaa film ama xasuusta flash footage. Sidoo kale dhisay waa ciyaaryahan video in jaanqaadi badan video maqal iyo qaabab. Qaybta tafatirka ee software-ka kuu ogolaanaya in aad ku darto oo aad doorashada saamaynta gaar ah oo ka mid saxo midabka. Si ka duwan qaar ka mid ah barnaamijyada kale, waxa aanu u ciyaari qaybsiga deg dega ah ee wax soo saarka dhammaadeen, iyo waxa aanu qaar ka mid ah waxay leeyihiin goldaloolo fog sida waafaqsan tan iyo markii ay u furan yahay-il. Marka aad isku dayi kartaa barnaamij lacag la'aan ah, si kastaba ha ahaatee, ma aad wax tahay soo baxay oo si fudud aad u uninstall karo haddii ay noqoto in aan ku haboon baahidaada ama si sax ah oo leh barnaamijyo kale oo aad ka shaqayn.
6. Windows Movie Kan sameeyey,
Tani waa wax soo saarka free Microsoft in aad kala soo bixi kartaa Vista ama Windows 7 mashiinada. Sababta oo ah waxa uu wax soo saarka Microsoft ah, aad u ogaato waxa ku dari doonaa in barnaamijyada hadda si fudud oo aan isku dhacyada. Waxad abuuri kartaa videos, ama wax ka bedel kuwa hadda jira, waxaan iyaga ku badbaadin in tirada qaabab video for koombiyuutarka ama qaybsiga. Waxa kale oo ay kuu ogolaaneysaa in aad geliyaan aad videos inay webka ama iyaga si fudud wadaagaan. Windows Movie Kan sameeyey, sidoo kale waxa uu awood u leeyahay inuu weli qaadan sawirro iyo dhigaan show slide ah. Ma doonaysaa in aad ku darto oo aad music u gaar ah, ama aad song jecel? Windows Movie Kan sameeyey samayn kartaa in.
5. Kan sameeyey Xara / Magix 3D
Barnaamijkan wuxuu la iman version tijaabo ah si aad u aragto haddii aad u jeclaan, markaas cusboonaynta in version la siiyo haddii aad samayn. Waxayna u shaqaysaa iyadoo Vista OS ama ka dib. Waxaad samayn kartaa animations text 3D kuu gaar ah, sida shaashada mesmerizing on Windows. Kani waa barnaamij fiican ee qof kasta oo aan marnaba la soo shaqeeyay barnaamijka animation ka hor. Interface waa mid aad u fudud in ay bartaan, iyo barnaamijku ku soo beegmay iyadoo Casharrada inuu ku caawiyo jidka. Waxaad saddex meelood si ay u helaan astaamaha barnaamijka - sudhaan menu sare, sudhaan menu midig, iyo ka menu fursadaha bidixda, sidaa darteed uma baahnid in aad walwasho ku saabsan sida saxda ah xusuusto meesha laga helo wax. Beddel midabada, si qoto dheer ah iyo Hooskooda, iyo fursadaha kale si sahlan. Haddii aad riixi kartaa oo jiidayo, waxaad isticmaali kartaa Xara. By jidkii, Xara waa magaca cusub. Waxaa la odhan jiray Magix ka hor.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in Windows Vista ama ka dib waa version trialware ah si aad u aragto haddii aad u jeclaan. Waxaa loogu talagalay dheeraad ah oo diinta files MXF qaab a video joogto ah ka badan waa videos tafatirka. Waxaad badbaadin karo videos in tiro ka mid ah qaababka caadiga ah sida .mp4, AVI, iyo wmv, iyo dabcan, diinta 2D in 3D. Waxa ay u ogolaataa for loo maqli karo ee videos on noocyo kala duwan oo qalab, oo ay ku jiraan kiniinno, casriga ah, iyo nidaamyada ciyaaraha. Faa'iidada barnaamijka waxa uu leeyahay waa in u gaarin soundtrack ka video in ay ka jaraan wadada audio. Barnaamijka Tani waxay sidoo kale waa mid aad u dhakhso ah, iyo waxa loo isticmaali karaa in afar luuqadood oo kala duwan.
3. Cortona Movie Kan sameeyey,
Ma leedahay computer ka weyn in kaliya ma socon karto qaar ka mid ah software ka cusub? Kani waa barnaamij aad u. Waxa badbaadiyay loox kasta si aadan u lumin loox sida aad u tagto. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad badbaadin in qaar ka mid ah qaabab ugu badan, sida .mov iyo wmv. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa screencapping iyo badbaadinta images sida .jpg, Bitmap, ama .png. Waxa kale oo ay soo dhufsan karto video 3D inuu ka soo leexdo galay videos gaaban ama weli sawiro aad u badbaadin karto ama il. Cortona aad u saamaxaaya in ay ka mid image Daliil mouse ay dhacdo in aad u baahan tahay, waayo, waxbarida videos, iyo waxaad ku dari kartaa watermarks si aad u ilaaliso shaqada. Haddii aad raadineyso weeyna barnaamijka inay abuuraan waxbarasho ama waxbarida videos, Cortona laga yaabaa in mid ka mid ah oo kaliya.
PackShot ka shaqeeya Windows Vista oo isticmaalaya kombiyuutarka ama ka dib. Waxaa haboon samaynta videos for ganacsigaaga marka aanad haysan waqti ay ku bartaan barnaamijyada adag iyo suulka dhex Hanuuniyaa user qaro weyn ee. Isku dayga in ay badeecad iibiso sida kabaha ama dheryaha ku jira internet-ka waxay noqon karaan kuwo adag, tan aan dadka iyaga ka qaadan kartaa oo iyaga eegto oo dhan. Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad samayn animations 3D ah ee wax soo saarka si ay macaamiishu kaa gebi ahaanba ka qaadan kartaa kabo kuwa. Wada hadalladii saaxir dhisay-in si toos ah camera sidaas oo dhan ka shaqeeya muuqan. Waxaad si aad videos ku dari kartaa feature zoom ah, sidoo kale. Dhoofinta aad videos isla markiiba mar aad sameeyaa iyadoo la isticmaalayo muujinta OneClick waa fursad kale.
Barnaamijkan free kuu ogolaanaysaa inaad qaadato 2D videos in qaab kasta oo iyaga loogu badalo in ay 3D si fudud in Windows ama Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6. Waxaad isticmaali kartaa videos ama kuwa aad ku badbaadi oo ku dhoofin in .mp4, ama iyaga gubi in disk inuu u ciyaaro ciyaaryahanka DVD ah. Wondershare Waa si degdeg ah, si dhakhso ah. Waxaa sidoo kale ku shaqeeya ku saabsan habka khasaaraha-yar ah oo si tayo video ma xaqiro in hawlaha qaab beddelidda. Wondershare Ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah feature tafatirka video ah, sidoo kale, si aad noola images ama ku darto subtitles haddii aad rabto. Waxa ay taageertaa qaabab in shaqayn doonaa looxyada ama casriga ah.
Sida aad arki karto, waxaa jira wax badan oo doorashooyin halkaas, haddii aad doonayso in aad qabato animation kuu gaar ah abuuridda, ama uun aad rabto in aad wax ka bedel filimada. Bal qiyaas siduu jiitay macalinka ilmahaaga noqon doonaa marka isaga ama iyadu ay noqoneyso in mashruuca dugsiga ee 3D, ama sida Yaabid aad Tababaraha noqon doonaa marka aad soo bandhigidda kulanka sannadlaha ah la isticmaalayo 3D videos. Oo waxba ka leedahay in ay dib kuu dhigay dime ah, haddii aad doorato in aad u cusboonaynta yar ee liiska ku jiray oo barnaamij tijaabo ah.
Fadlan ogsoonow: Qaar ka mid ah koob software boggayaga liiska ku jira barnaamijyada maxkamad in aad siin gaaritaanka kooban ka dib markii maxkamad ku dhamaado ama iyaga oo aan haysan oo dhan ka mid ah qaababka ay heli karaan dadka isticmaala weli, halka qaar kalena ay yihiin barnaamijyada il furan in gebi ahaanba bilaash ah.
Top Toban Songs ee caanka 3D Movies
Top Toban 3D Video Players u PC
Top ciyaartoyda CD 2015
> Resource > Top List > Top Toban Free 3D Video Rinjiga